မတက်ချင်တဲ့ပွဲမို့လို့ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲပေမယ့် အိမ်မှာရှိတဲ့ ကြက်ဥနဲ့ဘဲ ဖြတ်သန်းနေလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ထက်ထက်ထွန်း……. – Cele Oscar
မတက်ချင်တဲ့ပွဲမို့လို့ စားဝတ်နေရေးခက်ခဲပေမယ့် အိမ်မှာရှိတဲ့ ကြက်ဥနဲ့ဘဲ ဖြတ်သန်းနေလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ထက်ထက်ထွန်း…….
ပရိတျသတျ ကွီးရေ …မျောဒယျသရုပျဆောငျ တဈယောကျဖွဈတဲ့ ထကျထကျထှနျးဟာဆိုရငျ ရုပျရှငျ ဇာတျကားပေါငျးမြားစှာ ကိုရိုကျကူးထားတဲ့ အပွငျ အစီအစဉျတငျဆကျသူ တဈယောကျ အဖွဈလညျး အနုပညာ လမျးကွောငျးပျေါမှာ အောငျမွငျစှာ နဲ့ လြှောကျလှမျးနတောပဲ ဖွဈပါတယျနျော..။သူမဟာ ဆိုရငျ လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနတှေေ မှာ ပွညျသူလူထု နဲ့ အတူတဈသားတညျး ရပျတညျခဲ့တဲ့ သူပဲ ဖွဈပါတယျ။လကျရှိ အခွအေနေ တှကွေောငျ့ အခကျအခဲ ဖွဈနတေဲ့သူတှကေိုလညျး လှူဒါနျးမှုတှကေို မကွာခဏ ဆိုကလို ပွုလုပျပေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
ထကျထကျထှနျး ကတော့ အလုပျမလုပျရတာ ကွာလို့ စားဝတျနရေေး ခကျခဲနပေမေယျ့ အိမျမှာ ရှိတဲ့ ကွကျဥ နဲ့ ပဲစားမယျဆိုပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျက ပှဲတကျဖို့ငွငျးလိုကျတဲ့ အကွောငျး ပှငျ့ပှငျ့ လငျးလငျး ပွောလာပါတယျ..။ဒီကနမှေ့ာ ပွုလုပျတဲ့ အခမျးအနားပှဲ တဈခုကို အနုပညာရှငျ တခြို့တကျရောကျနတေဲ့ ပုံရိပျတှေ ပွနျ့နှံ့လာကာ ပရိသတျတှေ ကွားဝဖေနျမှုတှေ မွှငျ့တကျ နပွေီး ထကျထကျထှနျး ကတော့ သူမအနေ နဲ့ ပှဲတကျဖို့ ငွငျးလိုကျတဲ့အကွောငျး တှကေို ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာကနအေခုလိုပဲ ရေးသားဖျော ပွလာတာပဲ ဖွဈပါတယျနျော။
အဲ့ဒါကတော့ ” “ဒီနေ့ လိုငျးပျေါ နာမညျကွီးမယျ့ အခှငျ့အရေးလေး တဈနကေ့ ကြှနျမငွငျးလိုကျတယျ 😅😅😅လှလှလေးပွငျ ပှဲလေးတကျအလုပျလေးမလုပျရတာကွာနေ ပမေယျ့အလုပျ မရှိလို့ စားဝတျနရေေး ခကျခဲနပေမေယျ့ ကြှနျမအိမျမှာ ကွကျဥ နဲ့ ဘဲ ဖွတျသနျးနလေိုကျတယျ..” ဆိုပွီး သူမရဲ့ပွတျသားတဲ့ ခံယူခကျြကို ပွောပွလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ခိုငျမာတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ နဲ့ ပွတျသားတဲ့ ခံယူခကျြတှရှေိပွီး ပွညျသူလူထု နဲ့ တသားတညျး ရပျတညျခဲ့တဲ့ ထကျထကျထှနျးကို ပရီတျသတျတှကေိလညျး အားပေး စကားပွောထား တာကို လညျးတှမွေ့ငျရ ပါတယျနျော။ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီး ကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ။
ပရိတ်သတ် ကြီးရေ …မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ထက်ထက်ထွန်းဟာဆိုရင် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာ ကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ အပြင် အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ တစ်ယောက် အဖြစ်လည်း အနုပညာ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အောင်မြင်စွာ နဲ့ လျှောက်လှမ်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။သူမဟာ ဆိုရင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေ မှာ ပြည်သူလူထု နဲ့ အတူတစ်သားတည်း ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ အခြေအနေ တွေကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်း လှူဒါန်းမှုတွေကို မကြာခဏ ဆိုကလို ပြုလုပ်ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထက်ထက်ထွန်း ကတော့ အလုပ်မလုပ်ရတာ ကြာလို့ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲနေပေမယ့် အိမ်မှာ ရှိတဲ့ ကြက်ဥ နဲ့ ပဲစားမယ်ဆိုပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်က ပွဲတက်ဖို့ငြင်းလိုက်တဲ့ အကြောင်း ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြောလာပါတယ်..။ဒီကနေ့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ အခမ်းအနားပွဲ တစ်ခုကို အနုပညာရှင် တချို့တက်ရောက်နေတဲ့ ပုံရိပ်တွေ ပြန့်နှံ့လာကာ ပရိသတ်တွေ ကြားဝေဖန်မှုတွေ မြှင့်တက် နေပြီး ထက်ထက်ထွန်း ကတော့ သူမအနေ နဲ့ ပွဲတက်ဖို့ ငြင်းလိုက်တဲ့အကြောင်း တွေကို ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာကနေအခုလိုပဲ ရေးသားဖော် ပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
အဲ့ဒါကတော့ ” “ဒီနေ့ လိုင်းပေါ် နာမည်ကြီးမယ့် အခွင့်အရေးလေး တစ်နေ့က ကျွန်မငြင်းလိုက်တယ် 😅😅😅လှလှလေးပြင် ပွဲလေးတက်အလုပ်လေးမလုပ်ရတာကြာနေ ပေမယ့်အလုပ် မရှိလို့ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲနေပေမယ့် ကျွန်မအိမ်မှာ ကြက်ဥ နဲ့ ဘဲ ဖြတ်သန်းနေလိုက်တယ်..” ဆိုပြီး သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ ခံယူချက်ကို ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် နဲ့ ပြတ်သားတဲ့ ခံယူချက်တွေရှိပြီး ပြည်သူလူထု နဲ့ တသားတည်း ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ထက်ထက်ထွန်းကို ပရီတ်သတ်တွေကိလည်း အားပေး စကားပြောထား တာကို လည်းတွေ့မြင်ရ ပါတယ်နော်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီး ကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာ ပြုလုပ်မယ့် ဝေဟင်မပျံနိုင်တဲ့ လေယာဉ်ပျံများကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ဖို့ ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ဘုန်းဆက်သွင်